Nye bụ onye akwụ ụgwọ ọkachamara na-akwụ ụgwọ kachasị elu? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Cycgwọ ịgba ụgwọ ịgba ọsọ - olee otu anyị ga-esi edozi
Cycgwọ ịgba ụgwọ ịgba ọsọ - olee otu anyị ga-esi edozi
Nye bụ onye akwụ ụgwọ ọkachamara na-akwụ ụgwọ kachasị elu?
Anyị adọtara ọnụ an'elu10 nkekasị akwụ ụgwọ ịgba ígwèn'ime ụwa ugbu a.
Egan Bernal - euro 2,8.
Geraint Thomas - 3 nde euro.
Tom Dumoulin - 3 nde euro.
Alejandro Valverde - nde euro 3,5.
Vincenzo Nibali - 4 nde euro.
Chris Froome - nde euro 5,2.
Peter Sagan - 6 nde euro.
Ajụjụ anyị jụrụ ọgaranya n’ụtụtụ a bụ ole igwe kwụ otu ebe ha nwere? (Uptempo music) Ugbolo ole ka inwere ma nwekwaa n'ulo? - Ole n’ime ndi otu m nwere, onweghi, mana ole ka m nwere? nwee n'ụlọ, yabụ enwere m, otu, m ga - ekwu n'etiti igwe kwụ otu isii na asatọ gburugburu ụwa.- Ego ole ị nwere ka ị nwere n'ụlọ? (chịrị ọchị) - Ọtụtụ. Eleghị anya na 10 ma ọ bụ 11. - Ọtụtụ dị ka nwunye m na-ewekarị iwe.
Ekwesịrị m ịmegharị igwe kwụ otu ebe site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ, mana ee, enwere m ụdị igwe kwụ otu ebe site n'oge ọ bụla m bụ pro na ee, ee, ọ ga-abụ ọtụtụ ugbu a - wow, nke ahụ ga-abụrịrị ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, mana Banyere igwe kwụ otu ebe ugwu ugwu ma ọ bụ igwe gravel ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe, ị nwere ọtụtụ n'ime ha? - Ee, enwere m igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, ịgba ọsọ igwe kwụ otu ebe, yabụ ee, adị m njikere maka ihe ọ bụla - Ee, ọ dị ka ọ bụ karịa ịnyagharị igwe kwụ otu ebe site n'akụkụ ruo n'akụkụ. Nke ahụ dị ka ịchọrọ ụlọ nkwakọba ihe. - (ochi) Ee, achọrọ m nnukwu okpuru ulo, nke ahụ bụ n'ezie. - Olee otu igwe kwụ otu ebe ị nwere na ngụkọta? - Oh Nwoke.
Nke ahụ bụ otu, nke ahụ bụ n'ezie ajụjụ siri ike mara mma. Na ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè ebe a, na-agba ọsọ, n'ụlọ, ọgba tum tum m na-amaghị, ise ma ọ bụ isii, ma ị maara. Echere m na akụkụ ahụ bụ n na-agbakwunye otu.
N bụ igwe kwụ otu ebe ị maara, yabụ na ị gaghị enwe ike ịnwe ịnyịnya ígwè zuru oke - (exhales) Enwere m nnukwu ihe site na HTC, enwere m Scott si HTC, enwere m igwe kwụ otu ugwu Canyon site na 2011, Omega Pharma-Lotto, enwere m Ridleys abụọ, m nwere Pally, nke ejiri aka mee otu okpokolo agba sitere na America. Enwere m Vespa. (Zzgha) Ọ bụrụ na nke ahụ na-agụnye a igwe kwụ otu ebe. M nwekwara a ọgba tum tum (Buzzer) na a abụba igwe kwụ otu ebe.
My mbụ mnya igwe, a GT, a classic Mmaji Triangle ma ọ bụrụ na ị na-echeta. Eeh. Ee - modeldị dị a thataa ka nke ahụ bụ? - Ọ bụ, nke ọma, nke ahụ bụ, oh, ị chere.
Echere m na ọ bụ GT01. Ọ meela agadi, ọ dị ka afọ 2000. Ee. 1999.- Ọfọn, enweghị m ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, mana enwere m ole na ole.
Ugbu a, ihe mgbaru ọsọ m abụọ bụ, enwere m àgwà Cannondale, nnukwu igwe kwụ otu ebe. M na-agba ịnyịnya ya mara mma nke ukwuu. Echere m na ọ bụ otu n'ime ihe mere m ji meziwanye nke ọma na ndagwurugwu.
Mgbe Tour de Suisse, enwere m ezigbo ajọ njọ ma kpebie na m kwesịrị ịkwalite nka m ka m wee zụta agwa wee bido rụọ ọrụ na igwe ịgba ịnyịnya igwe m. Enwekwara m Cannondale Slate, nke dịka Swiss Army Knife n’etiti ịnyịnya ígwè. Nwere ike ịnya ya ebe ọ bụla.- Ee.- Ya mere, ndị a bụ igwe kwụ otu ebe abụọ m nwere.- Ọ bụghị ọtụtụ.
Naanị atọ ma ọ bụ anọ anyịnya igwe. - Naanị m nwere otu ihe n’onwe m. Ọ bụ ya. - Naanị otu igwe kwụ otu ebe? - Ee, enwere m onwe m nke m ji ego nke m zụta - ya mere na ngụkọta na anyịnya igwe ị na-enweta site na otu? - Atọ. - Karịa 10 m chere. (ọchị) - Ọ bụghị nke ahụ ọtụtụ, n'ihi na igwe kwụ otu ebe bụ nke otu. (ọchị) Ma eleghị anya, igwe igwe isii ma ọ bụ asaa n'ụlọ ugbu a, gụnyere igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, ihe ndị ahụ niile. - nwe? Enwere m ọtụtụ ihe karịa nke m.
Know mara, otu a na-ahapụ anyị ka anyị nwee ọtụtụ igwe kwụ otu ebe. Ma ee, enwere m ụfọdụ. Anyị ka nwere ebe na steeti ndị dị na Asheville, North Carolina.
Echere m n’etiti mụ na nwunye m, ikekwe anyị nwere igwe kwụ otu ebe iri ma ọ bụ iri na abụọ n’ebe ahụ, wee nwee ike itoolu ọzọ na Girona - igwe kwụ otu ebe niile ka ị nwere igwe kwụ otu ebe? - Enwere m ụdị ụdị dị iche iche, dịka igwe kwụ otu ebe, E-anyịnya igwe, igwe ekwo ekwo, ee. Otu ụyọkọ ọgba tum tum dị iche iche, igwe kwụ otu ebe, ya mere ee, abụ m onye nchịkọta - ị nwere igwe kwụ otu ebe? - mba, n’agaghi, mana enwerem nke nwere ike ibu igwe ugboala. Enwere m nke ochie m, igwe egwuregwu mbụ m, BT.- Oh, dị jụụ.- Na nke ahụ nwere ike imerụ ntakịrị ahụ ugbu a, mana ole igwe kwụ otu ebe ka ị nwere? Ha! Achọghị m ịgwa gị igwe kwụ otu ebe ole m nwere n’ụlọ, maka na ha dị ole na ole, mana ihe kachasị mkpa bụ igwe egwu aero.
M ka nwere nke ahụ. Na m igwe kwụ otu ebe bụ naanị igwe kwụ otu ebe nke m nwere n'onwe m. Ndị ọzọ bụ n'ezie igwe kwụ otu ebe ma enwere m ịnyịnya ígwè TT na-agba ịnyịnya na ịgba ịnyịnya ígwè.
Had ga-azụrịrị igwe ịnyịnya igwe gị n'ihi na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enweta igwe kwụ otu ebe na njedebe nke afọ anaghị enweta ya, nri? You nweta ya? - Mba enwetara m ya. Atọ ndị a.
Echere m na e mere atọ ma ọ bụ anọ n'ime ndị a. Otu rere. Otu dị n'isi ụlọ ọrụ Canyon.
Otu dị na ebe ngosi ihe mgbe ochie na Malvern. Na nke ọzọ bụ n'ụlọ m. - Ọ bụ otu n’ime mmechuihu kachasị m nwere mgbe m tụgharịrị na Professionalchọta Ọkachasị enweghị m ike idobe igwe kwụ otu ebe na ngwụcha afọ ahụ, n’agbanyeghi na azụrụ m ole na ole.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala n’ụbọchị ndị a dị iche na ndị ọzọ ha debere na ndị ole ha na-anaghị. Adam Yates ebe ahụ nwere naanị ịnyịnya ígwè atọ n'aha ya. Nri, ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, biko nye anyị mkpịsị aka aka n'okpuru.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ihe ndị a na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ime ma ọ bụrụ na ha abụghị ndị ọkachamara ịgba ígwè, pịa ebe a.
Ego ole ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè kacha elu na-akpata?
Ihen'elu-20 kachasị eluenwetakwa ndị na-agba ígwèdị ka akụkọ si kwuo
Chris Froome (Gbr) Israel bidoro mba nde € 5.5.
Tadej Pogačar (Slo) UAE-Team Emirates, Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe, € 5 nde.
Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers, € 3.5 nde.
Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiers, € 2.8 nde.
Kedu otu ndị otu ịgba ịnyịnya ígwè si enweta ego?
Enwere onyinyeegon'ihi na nkebi na mkpokọta Enwee Mmeri maka onye ịnyịnya, ma ọtụtụ n'imeegosi n'akaotundị nkwado. Ọ bụ ya mere ndị na-agba ịnyịnya, mgbe ha meriri n'egwuregwu, na-ezipụ uwe ha ma tụọ aha onye nkwado aha ha n'obi. Igwefoto dị na ha ma ọ bụ oge ire mgbasa ozi ahụ.
ọ bụ ajụjụ ọtụtụ n'ime anyị jụrụ ma ikekwe ole na ole n'ime gị echewo ego ole ọkachamara triathlete na-enweta ugbu a n'ezie azịza nke ahụ dịgasị iche nke ukwuu site na ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu ma ghọta na ọ bụ mmadụ ole na ole na-eme egwuregwu dị njikere ime nke a. ee, anyị nwere nnukwu ihu ọma inwe ọtụtụ ndị mmeri Ironman taa, ego ndị anyị na-akwụ na-esonyere anyị iji kọwaa ntakịrị ihe banyere ya ma e wezụga ahụmịhe nke anyị iji nye gị nghọta ka mma banyere otu na otu ọtụtụ apro triathlete kwesịrị ugbu a, n'ezie, ndị egwuregwu dị ka alistairbrownlee daniela ryf na jan froden bụ ndị pụrụ iche pere mpe n'ihe gbasara arụmọrụ ha na ego ha nwetara ma ọ bụrụhaala na ha na-eme, inweta ọtụtụ site na ego nrite bụ ihe yikarịrị ma enwere m n'aka na ha nwere ike ị nweta ugbu a karịa site na azụmahịa nkwado dị oke ọnụ ahịa azụmahịa nke Apro-traffic, ọ dị mma ịkọba ama na ụzọ dị mkpirikpi i2 na-eme egwuregwu na-eme ka ego ha dị iche karịa nke onye na-agba ọsọ ga-agba ọsọ. ego na a obere N'ezie itu aspiring Olympic onye mmeri na-eme egwuregwu ha enwetakwa ebe a na UK na-na-emekarị kewaa n'etiti mba lọtrị ego na-abịa site na mba na-achị isi, ma nke a format na m dị nnọọ kwuru ebe a na UK bụ otu usoro na Fraser na Agara m na Heather na pentathlon nke oge a mana n'ezie enwere usoro a Onye ọ bụla na-eme egwuregwu na-ezute ụfọdụ njirisi kwa afọ nke ha na-ekpe ikpe ma na-ahazi dịka ego dị iche iche, ị nwere ike ịnata ihe niile site na nnyefe ego obibi iji gaa njem mmefu na ụgwọ ọnwa na-akwụ ụgwọ iji kwadoo gị n'egwuregwu Olimpik, na-agbazi ego a ugbu a maka usoro ihe omume Olympic ihe karịrị afọ anọ ma nwee ike ịrịgo ma ọ bụ gbadata dabere na arụmọrụ onye egwuregwu. Nke a bụ otu ị si amalite ịghọta nrụgide ahụ ubu nke ndi n’agba egwuregwu n’egwuregwu Olimpik wee gaa n’ego nrite maka ndi ahu i2 -ala n’agba egwuregwu ma ha na enweta ego ha n’aka W atchtower Series Races, World Cups, European Cups, Pan American Cups na na na na ọ na-agbadata n'usoro ahụ site na usoro nke Watchtower ka ha wee nwee ebe a na-agbata n'ọsọ maka Watch Tower Series nke $ 2.4 nde ekewara n'etiti agbụrụ asaa a mma ọdọ mmiri nke 855,000 ugbu a na-akọrọ n'etiti n'elu 35 na-eme egwuregwu na njedebe nke afọ.
Agbanye WTS ọ bụla nwere ọdọ mmiri onyinye nke $ 150,000, gụnyere 18,000 maka Ebe mbu na $ 1,000 maka nke iri abụọ na nke a na-abawanye maka nnukwu ngwụcha na ngwụcha oge ahụ, onye mmeri ụwa nke WTS ma ị nweta ego Ọ bụ si na 500 nke nọrọ na nke iri na abụọ ma ọ dị obere karịa 4,900 ka ị nwere ike ịhụ na enwere ike ị nweta ezigbo ego ebe ahụ, mana ọ na-agbada ngwa ngwa mgbe ị ruru 10, otu na-akpata obere ihe dị ka 1900 na na ndepụta nke ihe ruru ndị egwuregwu 50 na ndị ọzọ, nke ahụ pụtara na ọtụtụ ndị egwuregwu na-ejedebe na mpụga ego a, mana ọ bụrụ na ị gaa n'ọsọ ndị a ma kwụọ ụgwọ maka ma ọ bụ maka mmefu njem maka ebe obibi, ndị obodo gị na-akwụ ụgwọ Otu na-achị isi mgbe ahụ ị nwere ike ịlaghachi ezigbo ụgwọ ụbọchị, ma ọ bụrụ na ị gaghị ewelata ụgwọ nwere obere ụgwọ ma ọ bụ ikekwe ọbụlagodi na usoro usoro Watchtowerlọ Nche bụ ọkwa kachasị elu nke ịgba ọsọ na ọdọ mmiri ego kachasị elu na ụdị ihe niile Ọ bụrụ na naanị itinye aka na ya World Cups, nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na nke emebeghị maka usoro World Cup ma ọ bụ naanị European Cups, m na-agbata n'ọsọ ego dị nnọọ ala na mba federations adịkarịghị akwụ ụgwọ maka ndị na-eme egwuregwu na njem ha mmefu maka ụdị agbụrụ a na Agara m na nkwado nkwado na nke ahụ na-atọ ụtọ maka mkpụmkpụ na enwere ndị egwuregwu n'ihi na mgbe ha so n'òtù egwuregwu, mgbe ahụ ee, ụlọ ọrụ gọọmentị mba ndị a nwere ike ịnwe ndị na-akwado ha, mana nke ahụ apụtaghị na ndị egwuregwu ọ bụla ga-enwerịrị ịkwụ ụgwọ site na ya, yabụ ha ga-aga ebe ahụ ma gbalịa ịchọta ndị ha na-akwado ha, mana m ga-eme ihe n'eziokwu na ọ na-esiri ha ike na ndị egwuregwu ITU, n'ihi na ka anyị kwuo eziokwu, ị na-elele ole ka ị bụ emebe agbụrụ agbụrụ ee ee enwere agbụrụ ole na ole n'ebe ahụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ụmụ nwoke ITU elitist elitist na nke ahụ pụtara na mmasị ha nwere bụ n'èzí Olimpikị abụghị nnukwu egwuregwu ahụ ọ bụ ya mere ndị na-akwado ha ji enye onyinye Anaghị etinye ego na ha oge niile, yabụ ọ bụrụ na itinyeghị aka nọ n'elu egwuregwu ahụ, ọ bụrụ na ịnweghị floraduffy ma ọ bụ Alistair Brownleethen n'ọsọ a, ọ bụrụ na ị nọ n'oké ọ nwere ike ịbụ ezigbo ọ na-esiri ha ike imeri nkwado onye a ma ọ bụ ihe ọ bụla bara uru ugbu a maka ndị na-agba ntachi obi, ụwa nwere ike bụrụ ọkachamara dị iche iche mgbe ha na-anọ n'akụkụ mkpuchi ọ bụla nke ndị otu mba ma chọọ okwu ka mma maka ha na site na nke m ahụmahụ onwe onye na ntachi obi ịgba ọsọ. Ọ na-adịrị m mfe ịchọta ndị na-akwado ndị mmadụ n'otu n'otu n'ihe banyere agbụrụ. Ekwesiri m inyocha ego nile nke arace ka m choro omimi nke ubi na ikike m ime nke oma n'ime ya, ego nrite na onu ahia nke ulo, njem na ihe ndi ozo na-ezighi ezi, ọ bụ ihe ịrịba ahụmahụ na a nnọọ ùgwù ndụ ma a ọjọọ agbụrụ na-abụghị nke na-agbata n'ọsọ ego na ị na-na na na n'ezie malitere inwe mmetụta nke ego dị ka ị ka ga-akwụ ụgwọ gị n'ụlọ ma m ga-eme ihe n'eziokwu, Ọ dịghị mgbe m nwere ruo n'ókè ebe m mere nwere ike ịkwado onwe m kpamkpam site na ego m na-enweta triathlon, ana m arụ ọrụ mgbe niile n'akụkụ m na nke m nke na-azụkarị ọzụzụ, yabụ echere m na ọ ga-aba uru ịgwa onye nwere ike ịme nzọụkwụ ọzọ ma ọ bụ, na-eme ihe n'eziokwu, ọtụtụ nzọụkwụ na nke a Iscanadian ntachi obi na-eme egwuregwu na multiple Iron Man eto eto cody billshi cody ukwuu, na ị nọ ebe a taa umnow s chau ị na-mgbe niile incredibly-emeghe banyere gị kpọkwara ka a ọkachamara triathlete na ihe ndị dị adị nke ihe ọ na-ewe ime a Erite uru na egwuregwu na mgbe ụfọdụ naanị iji nweta ihe ị na-eri, gịnị kpatara ị na-eme nke a? Echere m, e nwere ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu n'ebe ahụ bụ ndị doro anya na ha emechibidoro isiokwu a, n'ihi ya, m na-ahụ pro-triathlon dị ka asọmpi karịa mgbe ọ bụla na ajụjụ a bụ otu m ga-esi nweta ntakịrị n'ime oké osimiri nke ndị na-eme egwuregwu ọ dịkarịa ala, ụmụ nwoke iri na abụọ si na ndị ọzọ pụọ? Kedu nke nwere nsonaazụ yiri nke ahụ ịpụtara, ee, imeghe bụ mgbe ọ bụla mara m mma ma amata m n'oge na enwere ezigbo agụụ ma ọ bụ nghọta, nke bụ ihe kpatara ya, uh, ma e wezụga ịnọ na afọ asaa gara aga Ọrụ ahụ bịara mgbe m chetara na enweghi ụkpụrụ ma ọ bụ ụzọ maka etu esi eme nke ahụ, yabụ site n'inyere aka nweta ihe ahụ niile n'ụzọ ana m atụ anya na m ga-enyere obere ụzọ aka maka ụfọdụ uru ndị ọzọ na em N'ikpeazụ, echere m na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ na-erite uru n'ezie ogo ụfọdụ nke nghọta.
E nwere ọtụtụ ihe ọgbaghara na mgbagwoju anya banyere ihe ndị ọkachamara ruru eru bara uru. Yabụ mgbe ị bipụtara ozi a, enwere m ike ịtọbe ogwe abụghị nnukwu ụlọ elu ma ọ bụ dị ala, kama ọ bụ isi okwu maka ndị ọzọ iji banye ma ọ dịkarịa ala na-atụle uru ọ bara iji nwee mkparịta ụka banyere uru ọ bara ịbịaru nso bụ ma ọ bụ onye na-eme egwuregwu, nke dị mma ugbu a maka ndị mmadụ nọ ebe ahụ nwere ike ghara ịma onye ị bụ, ma e wezụga ọtụtụ ndị agbụrụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịgwa anyị nkenke banyere nzụlite gị na triathlon na nrịgo ahụ ruo mgbe m ghọrọ ọkachamara egwuregwu, yabụ amalitere m intriathlon igwu egwu n'oge m dị afọ iri na ụma, ọ bụghị n'ezie ihe m ji kpọrọ ihe. Enweghị m mmasị inwe oge ụfọdụ na-eso triathlon mgbe mahadum gachara na akaraghị m n'anya ịhụ ebe ọ pụtara, na oke m na oke ụjọ, inwe nsonaazụ ndị nwere ike ịkọwa na m nwere ike ịbanye ya dị ka pro na echere m oge m tupu ewere kaadị m, mana m mechara wụsa ahụ site na nrụgide sitere n'aka ndị ọzọ ma ọ siri ike ịkọ oke ma eche m na afọ asaa gara aga bụ ihe bụ eziokwu nke ibi ndụ site na triathlon ị maara m chere ọ bụ ọtụtụ ihe na-adọrọ adọrọ karịa ka ndị mmadụ chere.
Echere m na nghọta bụ na anyị na ndị ịnyịnya ibu kwesịrị ekwesị nọ n'akụkụ ụwa niile nọ n'ọtụtụ ụlọ nkwari akụ mara mma ma ọ bụ na ọ bụghị ụlọ nkwari akụ mara mma ma ana m etinye oge dị ukwuu ijikwa ike ọgwụgwụ umi chere na enwere atụmanya na? Naanị anyị na-azụ ma na-agba ọsọ ma na-akwado ha na-akwụ anyị ụgwọ ka anyị wee dị jụụ. N'ezie, enweghị m ekele maka nke ahụ, mana egwuregwu ahụ nwere akụkụ azụmahịa niile na ya, ọ bụ ya mere m ji agba mbọ ịchụ ahịa iji chebe netwọkụ nke ndị na-akwado ha ga-agbakwunye uru na sekit ahụ, echere m na m biliri na ịrịgo ahụ ndị na-eme egwuregwu mgbasa ozi na-elekọta anya na-atụ anya na ọ bụghị naanị ndị na-eme egwuregwu ugbu a kamakwa ndị na-eme ihe ike ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya. Enweghị m mmasị na okwu a n'anya, mana enwere ya karịa ịsọ ọsọ ụbọchị ndị a, nke ahụ dị mma, ee ma enwere oge mgbe a nwara gị ka ị jidere ya n'ihi nsogbu ego.
N'ụzọ dị ịtụnanya, enwetụbeghị m ọnwụnwa ijide ya, ma eleghị anya ọ bụ naanị ọkwa atụmatụ ego m tinyere. Enweela m oge siri ike n'egwuregwu ebe m na-enweghị ego zuru oke, yabụ echere m na ọ bụ ihe achọrọ iji dịrị ndụ na egwuregwu ahụ, iji chekwaa ego maka oge siri ike karị n'ihi ya abughi ihe kwesiri ntukwasi obi, i gha abia.M biputere ezi ihe na ihe nkwado ndi ozo site na iji nlezianya mee atụmatụ nke mere ka eleba anya na obere ndu na ibi ndu di mfe ma ghara ikwe ka ndu m na-akawanye njọ, enwere m ike iguzogide nsogbu na nsogbu a. Enwere m ike ikewapụ ebe dị omimi na ego m nwere ike ime na m na-enweta ego zuru oke na ego nrite na ndị na-akwado ya na nke ahụ ga-adigide m ga-asị na isi ihe abụọ dị mkpa bụ nke mbụ bụ nghọta na m nwere ike ịnweta ego na egwuregwu a ma nke ahụ bụ ọ dị mma nke ukwuu oge ikpeazụ m dị ka onye na-amu amu nke m ga-agwụcha na uru ahụ ma nweta onwe m ụgwọ ọnwa, ma ọ bụrụ na m bụ ịgba ọsọ ọsọ nke bụ ụdị ịkpọ oku na-eme ka m chefuo nke a, m wee gbapụ na-eme ego na mbụ m pro oge n'ihi na Anọ m na-arapara n'oge m iji nweta kaadị m nwere ike m ga-eru eru afọ ole na ole gara aga, mana m sachara ma eleghị anya echere m ogologo oge, mana na oge mbụ m nwere ike ịme ego ozugbo, ọ bụ a otutu ogologo, ma dị ka afọ ole na ole mgbe e mesịrị tupu m bụ n'ezie ike ibi a ezigbo larịị si Protriathlon naanị, na ugbu a, anyị na-aga delve a bit ebe a, now you are open to it open yourblog and anyone out e nwebeghị na weebụsaịtị Cody na-elele nke ha blog na, biko mee nke ahụ, n'ihi na kwa afọ ị ga - afọ obere iweghachi ụtụ isi gị na ego gị na - enweta n'afọ na ihu ọha.
Ihe a niile dị ka nke a, olee otu ego si abịa, yabụ nkwado m na-enweta site na ndị na-akwado ha, nwere ike were ụdị dị iche iche na nke ahụ bụ ihe m na-enwetaghị ekele ịbanye na ọrụ ahụ, nke kachasị mma na ihe m na-achọ mgbe niile, Ozo nke ulo oru O siri ike ime ka ulo oru kwenye iweputa ha ego otua, agbanyeghi na ile anya na oru ego karie nke a, nke bu udiri ego diri ulo oru, dika. ọ nwere ike na-enye aka n'ezie, ọbụlagodi nha nhata nke dị na tebụl ụfọdụ na obere ụlọ ọrụ ma ọ bụ mmalite, ngwaahịa na-enweghị ego bụ n'ezie ihe onye ọ bụla chọrọ ịnye, mana oge ụfọdụ ọ nwere ike bụrụ nke kachasị enyere gị aka wee gosipụta ọkacha mmasị onye ọ bụla ma ị nwere họrọ agbụrụ, dabere na ebe ị nwere ike? -eme uru na ị maara na m ga-fọrọ nke nta bulie cherị, Echere m na ndị a na-eme egwuregwu ga-anọ ebe a, omimi nke ubi na na na ozugbo olee otú na-emetụta gị mgbe ọ na-abịa ịhọrọ site na-agba ọsọ? Ọ dị ka ịhọrọ agbụrụ bụ ihe m na-echegbu onwe ya, ma eleghị anya ọ bụ usoro m gbasara physics, mana m na-ahụ ya dị ka nsogbu njikarịcha ọtụtụ a na-enwe ma ọ dịkarịa ala ihe iri na abụọ m na-eche banyere ịtụle ego ole m chere na ego m nwere ike ịme. na oge ọ kwekọrọ na ahụmịhe mmepe bụ agbụrụ egwuregwu a ga-eme ka egwuregwu m ka mma. mmefu njem njem ohuru kedu ihe ọ ga-eri iji wulite m ths na adịghị ike ndị metụtara usoro a na-amasịkarị m ọkụ na ikuku na-eku ume nke mere bụkwa ihe m ga-ahụ ịmara etu m si nwee tupu m nwee ezigbo vibes thereum bụ ndị nkwado na-agba m ume ka m gaa ebe ahụ, m na-anwa ịhapụ ndị na-akwado m na nhọrọ agbụrụ m, mana oge ụfọdụ nke ahụ bụ ihe kpatara ya ma ịmara mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị mmetụta afọ na anaghị m enwe ekele.
Yabụ mgbe m lere anya n'oge m, m na-anwa ịhọrọ agbụrụ, ụfọdụ n'ime ha nwere nnukwu ihe egwu, ụgwọ ọrụ dị elu, ma eleghị anya nnukwu ụgwọ ma ọ bụ ihe ọ bụla na ndị ọzọ ga-adị ka ebe a na-atụkwasịkwu obi na-akpata ego ebe ican nwere olile anya dị mfe see okwu na ụfọdụ amụma na gịnị ka ị ga-agwa onye ọ bụla chọrọ ịbụ onye pro ma mee usoro ọzọ, enwere ndụmọdụ ọ bụla ị ga-ekerịta ya mere m na-ekwu na m ga-eme ya? Iji nye gị ụfọdụ ndụmọdụ a kapịrị ọnụ na ndụmọdụ ndị ọzọ zuru ezu m na-eche ka m wee nwee ike ịbịaru usoro a site na ọnọdụ ego ịchọrọ iji nwalee ma belata nrụgide ego, ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-eme nke ọma n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ mana m ga-akpọ asị ndị nwere nnukwu ego Nrụgide ya mere m chere na ịchọrọ itinye onwe gị n'ọnọdụ na-abụghị maka ịme ọrụ triathlon ma ọ bụ ịnwụ ka ikekwe ị nwere ihe? ego ndị ọzọ sitere na ọrụ nwa oge ma ọ bụ nkuzi ma ọ bụ ihe na-agbanwe agbanwe, mana ọ bụghị na ị ga-ebibi ya ozugbo na triathlon iji mezuo ma eche m n'ozuzu ya, otu esi enwe ndidi ma mụta igbu oge, nke a bụ egwuregwu nke ahụ nwere ike iri afọ iji ruo gị nwere aerobic nwere na gị soit n'ezie na-akwụghachi ndị na-eme egwuregwu maara otú e si egwu ogologo egwuregwu ọma. N'ihi Cody, nke a bụ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na i nyochabeghị blog ugbua. M na-akwado gị nke a n'ihi na ọ bụ n'ụzọ nkịtị ka ọ na-ewepụta kwa afọ pro triathlon mmefu, o doro anya na ọrịa na-efe efe nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị karị, mana ọ dị oke omimi na omimi, na-emeghe echiche, ọ bụ nnukwu isi iyi nke mmụọ nsọ mgbe m nọ ọduọ ụgbọala.
Ugbu a Cody emetụla ọtụtụ ebe, mana enwere ụzọ ole na ole anyị ka ga-enyocha, otu n'ime ndị otu a na mmadụ ole na ole na-abata n'uche site n'oge ugbu a na nke ahụ bụ ndị otu mbụ, na ndị otu egwuregwu bmc v ugbu a nwere uru na ha na-akwụ ụgwọ ka ị wee nwee ike ịnweta ego kwa ọnwa nke na-enye ọtụtụ nchekwa nke bụ nsogbu nye ndị na-eme egwuregwu dịka anyị tụlere Cody, otu ọghọm dị na ụfọdụ ndị otu a bụ na ha na-abịa site na nkwado nkwado? nye ndị otu ahụ, nke ahụ pụtara na a na-enye gị akụrụngwa nke dị egwu ma ọ nwere ike ọ gaghị enwe ngwaahịa na akụrụngwa ịchọrọ iji ma ọ bụ nwee ahụ iru ala ma ọ bụ rụọ ọrụ maka gị na nke ahụ ga - egbochi gị na ego nwere ike ịnweta na ndị na - akwado ya gafere na mgbe ahụ na ọ bụ akpatre e ịrụ ọrụ ego ugbu a Cody metụrụ nke a, ma ihe ụfọdụ na-akwụ ndị na-eme egwuregwu ego iji nweta ha na ihe omume ha na Racgba Ọsọ Ugbu a ihe na-ahụ na ọ bụ ego Naanị ịnwe onye na-eme egwuregwu n'ebe ahụ na-eweta ịtụkwasị obi na ihe omume ahụ, mana enwere olile anya na ọ dịkwa elu na-akpali akpali larịị ke ọduọ. N'ezie enwere nnukwu ego site n'aka ndị ọkachamara egwuregwu, mana enwere olile anya na ederede taa gosipụtara ọtụtụ ụzọ dị iche iche maka ego ahụ ma ejiri m n'aka na atụfuru m ụfọdụ, yabụ biko tinye aka na ngalaba nkọwa dị n'okpuru, mee ka m mara ma ọ bụrụ Echefuru m ọ bụla ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-achọsi ike na isiokwu a enyerela gị aka, ọ bụrụ na m ga-akwado gị ka ị gaa na Cody's blog dị ka m kwuru ugbu a ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na edemede nke taa Biko nye ya mkpịsị aka aka ma nwee mmasị na ya. Echefukwala iso anyị na mgbasa ozi mgbasa ozi, ma ọ bụrụ na ịnọbeghị, denye aha anyị n'okpuru
Kedu ihe a na-akwụ ndị na-agba ịnyịnya Tour de France?
Chris Froome nke atọTour de Francemmeriiriteụgwọ ọnwa ya ruru € 4.77m kwa afọ. Alberto Contador nọ na a 4m ụgwọ, ebe Vincenzo Nibali, onye mmeri 2014 na-akpata obere obere ihe ruru € 2.9m- € 3m. Riesgwọ ọnwa na-abawanye na arụmọrụ. Dị ka ọhụrụonye na-agba ịnyịnyaFroomegaenwetala € 95,000 mgbe e binyere aha ya na Team Sky.
Lụọ ọgụ ruo na njedebe nke ike gị, n'okporo ụzọ ebe ụgbọ ala Volkswagen ochie gị ga-ekpo oke ọkụ - ọkpụkpụ agbajiri - asịrị. Ihe ndị a bụ ihe kpatara otu ijeri mmadụ ji ekiri kwa afọ. Heard nụtụla banyere Giro d'Italia? amaghi.
Vuelta d'Espana? - Ehhhh Germany njem? - Mba. Ọ nweghị agbụrụ ndị a bụ nke izizi. Kedu ihe kpatara obodo jiri wughachi n'okporo ámá ha ka ha wee nwee ohere ịghọ ogbo nke Tourde France na otu akwụkwọ akụkọ ụgbọ ala si mepụta ihe omume ịgba ígwè kachasị ukwuu n'ụwa.
Daybọchị e mepụtara ya, ụwa malitere ịgba ịnyịnya ígwè - onye ọ bụla chọrọ otu - onye ọ bụla chọrọ ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ hụ onye nwere ike. Ọsọ a na-enwe n'ọsọ egwuregwu na-ewu ewu. Akwụkwọ akụkọ wepụtara ya - TV na redio adịghị - ma chee na anyị nwere ike iji nke ahụ maka onwe anyị: anyị ga-akwado ihe omume ndị a wee kọọ maka ha.
Ndị mmadụ hụrụ agbụrụ ahụ n'anya. Ha guzo n’akụkụ ụzọ egwu egwu ma zụta akwụkwọ akụkọ. Achọrọ ịma onye meriri, ụdị uwe ọ na-eyi na nke igwe kwụ d ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe nọ na-aga n’ihu.
Ruo afọ 50, ọ dịghị onye chere echiche ijide agbụrụ n'okporo ámá na-ewe ọtụtụ ụbọchị - echiche a sitere na mkpa. Ebe ọ bụ na akwụkwọ akụkọ L'Auto nwere ndị na-agụ akwụkwọ ole na ole, ndị otu nchịkọta akụkọ ga-echepụta ihe ọhụrụ na ihe na-atọ ụtọ. Nke a bụ otú e si mụọ echiche banyere agbụrụ kasị ukwuu n'ụwa - 'nnukwu egwuregwu ịgba ọsọ ga-agbanwe ụwa ịgba ọsọ'.
Nke ahụ bụkwa kpọmkwem ihe mere. The mbụ Tour de France nwere ihe ịga nke ọma na mgbe obere oge gachara, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị ndị na-agụ akwụkwọ zụtara L'Auto. Akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ ga-emechi.
Ee, anyị na-ekwu maka Tour de France, mana ụkpụrụ a bụ - 'ịme agbụrụ kacha ukwuu n'ụwa' - yabụ njem ahụ mere ka Germany, Italytali na Spain gaa ngwa ngwa. Ma n'oge ụfọdụ, nnukwu njem abụghịzi ihe na-atọ ụtọ. Onye isi nke L'Auto were iwe.
N'uche ya, ọtụtụ ndị bidoro gafere akara njedebe. Ya mere o kwere nkwa: njem ọzọ ga-esiri ike karị. Otu afọ ka e mesịrị, ọ chụrụ rs site na elu Alps - akụkọ banyere njem ahụ bịara bụrụ ihe na-atọ ụtọ - L'Auto rere ọbụna karịa.
Maka ebumnuche nke ịkọ akụkọ, onye ndu njem ahụ ga-etinye uwe na-acha odo odo na-ada ụda - nowiconic. Yabụ, ka anyị chịkọta: njem a na-ewe ihe na-erughị 6, mana ụbọchị 15. Routezọ ahụ na-eduga n'ugwu ndị siri ike.
Onye ọ bụla nwere ike isi n’ebe dị anya hụ onye bụ onye ndu. Njegharị ahụ na-akawanye ogologo. Na 1926 ụzọ ahụ toro ogologo karịa site na Paris ruo Moscow na ịlaghachi.
Enweela ọtụtụ nnwale na usoro njem. Iji maa atụ, ọ bịara bụrụ na ọ na-atọkwu ndị mmadụ ụtọ na ha nwere usoro dị mkpụmkpụ. Mgbe ntọhapụ nke France (1944), amachibidoro L'Auto maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ewepụtara magazin ọhụrụ n'oge na-adịghị anya ka ọ malitere njem ahụ .L'Equipe - nke onye na-ede akwụkwọ na-ebipụta akwụkwọ mechara mee Emilien Amaury.
Aha ọhụrụ - uzommeputa ochie - otu ihe ịga nke ọma. Maka oge mbụ, telivishọn France ga-akwụ ụgwọ maka ikike ịkọ na njem ahụ. Njegharị ahụ ekwesịghịzi ire akwụkwọ akụkọ ahụ, kamakwa kwado onwe ya.
Ọ na - aghọwanye akụnụba - enwere ndị na - akwado ya, obodo ndị a na - ahụ anya ga - agbaso ụkpụrụ ọhụrụ yana ikike mgbasa ozi na - eweta ego na ọtụtụ. Ruo 1989, onye nrụpụta France Peugeot dị njikere ịnye ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ ma chee na ọ ga-abụ mmesapụ aka iji nyefee. Peugeot jụrụ ịkwụ ụgwọ karịa 500,000 franc.
Onye mgba Fiat ji obi ekele nabata onyinye nke nde 6 wee bụrụ onye nkwado ọhụrụ. Ihe niile na-aga nke ọma, uru na-abawanye ruo mgbe mbido mbụ doping mere, mana Tour de France anaghị adịte aka. Afọ ncheta afọ 2013 gosipụtara etu esi ewu ewu. 250 obodo chọrọ ịghọ milestones.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa niile na-etinye akwụkwọ - gụnyere Tokyo na Qatar. Ọ nweghị ike ịka mma. Maka onye? Maka onye na-eme njem nleta ASO, Amaury Sports Organisation.
Ugbu a, o nwechara Tour de France. N'ezie, ọ bụ ihe nkwado izu atọ nke bụ nnukwu ego maka ASO. Mana olee otu o si arụ ọrụ? OSA na-akwụ ndị France ụgwọ ihe ruru euro 300,000 kwa afọ.
Na nloghachi, a na-ahapụ ya iji okporo ụzọ - ya bụ, ịkwọ ụgbọala - ma jiri ebe mgbasa ozi isiokwu. Naanị ụgwọ ndị ọzọ bụ ụgwọ ndị ọrụ na ego nrite. Ọ bụ ya! ASO enweghị ihe jikọrọ ya na ndị uwe ojii na mgbochi ụzọ - obodo ndị ahụ na-akwụ ụgwọ ya n'onwe ha.
Ha na-enwe mmasị ime nke ahụ. N'ihi na Tour de France na-eweta ego buru ibu: 'Otu izu tupu mmalite nke njem ahụ, ụlọ nkwari akụ na ụlọ nri niile edere akwụkwọ. Ndị njem nwere mmadụ 4,500, onye nke ọ bụla n’ime ha na-etinye ihe dị ka euro 150 na 200 n'etiti, na-eme mgbakọ na mwepụ “Utrecht bụ ezigbo ihe atụ nke otu esi efu ego obodo iji nọrọ ebe ahụ.
Na 2015 obodo welitere ihe ruru nde euro 17 maka Grand Depart. Kedu ihe ọzọ ọ na-ewe iji bụrụ ọkwa? Obodo? Na-akwụ ụgwọ ASO ma nyefee mgbasa ozi ezubere iche. Naanị ikikere Tour de France na-ekwe ka ere ya na mbido na njedebe.
Otu onyeisi obodo were iwe n'otu oge na ọ ga-akwụ nnukwu ego iji nye ndị ọgba ọsọ ahụ nkeji iri iji hụ - na ndị njem mgbasa ozi ọtụtụ awa. N'ikwu okwu banyere ndị njem mgbasa ozi: njem ahụ nwere onye mmekọ ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ gọọmentị maka ihe niile. Dịka ọmụmaatụ, Skoda na-enye ụgbọ ala ụgbọ ala ọtụtụ afọ.
Ndị mmekọ kachasị nke Tour de France ga- 5. nye ọtụtụ nde euro ịnọnyere ya. Mgbe ahụ enwere ndị mmekọ gọọmentị ga-etinye ihe dị ka nde 2.
Ma na mgbe ahụ, e nwere ndị ọrụ na-eweta ọrụ. Ndi ahia di iche iche, ulo mgbazinye ugbo ala, họtelu, ụgbọ elu. Ha na-akwụkwa otu nde ọzọ.
Buru nke ahụ n’uche. Ndị A.S.O. akwụ ngụkọta nke euro 300,000 na ndị na-agba ịnyịnya na-eweta igwe nke ha.
Ọsọ amalitebeghị na A.S.O. emeela uba.
Ma ndị mmeri abụghị naanị ndị na-eme njem na obodo - ndị na-akwado ha na-erite uru, ma ọ bụghị ya, ha agaraghị eme ihe niile ha nwere ike ime ruo ọtụtụ iri afọ. N'ihi gịnị? Nzipụta ruo ọtụtụ awa. Ugbu a ị nwere ike iche - Amaury ị maara nkịta ọhịa - nke ahụ adịghị njọ.
Mana enwere ego TV. Onu ogugu adighi - ma achoputara na opekata mpe onu ogugu onu ogugu nke njeghari a bu ikike ikike mgbasa ozi - Ijeri mmadu na-ekiri TV. Gaghị ekpughe nke ahụ.
Kedu ka agbụrụ a si baa uru dị egwu? 'Bụrụ ihe ọhụụ' Njegharị ahụ abụrụla nke ọma ugboro ugboro. Obere oge & ugwu siri ike. Emere ya ka ọ na-atọkwu ụtọ.
Uche dị iche iche nke ejiri nwayọọ nwayọọ gbakwunye nyere aka n'ezie. 'Nweta ụwa' - Ọ bụrụ na ịnọ ebe niile, ị ga-enwe Fans ebe niile. (Vidio: Nnukwu njem na eserese) Na mbido akụkọ ihe mere eme nke njem ahụ, e nwere ndị na-agba ịnyịnya 'na-esiteghị na France merie ma mee ememme ha.' Kọọ akụkọ dị mma '- ma ndị guzobere ya nwere ike ime nke ahụ.
Ha bụ ndị edemede ukwu na ndị ahịa ma mara otu esi eme ka ndị na-agụ akwụkwọ ha nwee obi ụtọ banyere agbụrụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala. 'Bụrụ onye mbụ' - Njegharị ahụ bụ agbụrụ mbụ gbara ọkpụrụkpụ na mbụ anaghị adịkarị mbụ. Njegharị a emeela kwa afọ kemgbe 1903.
Ewezuga n'oge agha. Ọ na-ada nfe, mana ọ bụghị. Jụọ Vuelta. 'Gịnị? '' Mgbasa ozi '- Tour de France na mgbasa ozi bụ egwuregwu zuru oke: Njegharị ahụ abụghị egwuregwu mgbede maka oge kachasị.
Ragba okirikiri dị mfe iji tinye n'ime mmemme telivishọn. Karịsịa n'oge ezumike oge okpomọkụ, mgbe a na-anapụ ọtụtụ ndị mmega ahụ. Ọnọdụ ndị pụrụ iche - ndị na - atọ ụtọ - bụ n'ezie na ngwụcha izu - mgbe ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ike ịhụ ha. 'Ọ dị mfe nghọta' - ndị nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè nwere ike ịghọta Tour de France.
Chọpụta - atụmatụ na-ekerekwa òkè, mana otu ihe doro anya: onye ọkwọ ụgbọ ala izizi gafere akara mmeri. Ma na njem ị na-adịghị nnọọ na-ahụ agbụrụ - obodo na-egosipụtakwa site na ha kacha mma n'akụkụ. Ugboro ugboro ndị mmadụ na-ele agbụrụ ma chee echiche: Achọrọ m ịga ebe ahụ.
Damn ya, nke a bụ ụlọ ụka mara mma. Ọbụna ndị na-achọghị ịma na-ekiri ya n’ihi na ha chere na ọ mara mma. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ egwuregwu kachasị ele ndị na-abụghị ndị egwuregwu egwu anya.
Ọ bụ ya mere e ji nwee izu atọ na kalenda nke ịgba agba agba agba. Kedu oge kachasị echefu echefu na Tour de France?
Kedu onye na-agba ịnyịnya Tour de France?
Ihe ojoo nke abuo meririTour de Franceakwadola ọnọdụ Mathieu van der Poel dị ka ụwaonye kachanụ kachanụn'ime ụwa, dị ka Sir Bradley Wiggins si kwuo.Ọnwa Isii 28. 2021
Ego ole ka ọ na-eri iji kwado ndị otu ịgba ịnyịnya?
Ndị otunwee ụdị sub-ndị nkwadon'ihi na haanyịnya igwe, gia, na nri. Mana ~ 70% nke mmefu ego ha sitere na ahaonye nkwado, nke na-akwụ ụgwọ apro otuebe na nso nke $ 5m ka $ 15m to name theotuma plasta akara ya na uwe niile.06.09.2020
Pro ịgba ịnyịnya ibu ọ bara uru?
Enweghịuru. Ndị ahụ metụtara nwetara ụgwọ ọnwa ha. NaN'ihi naNjem aga m eche na otu n'ime ndị otu egwuregwu nwere ike ree ụlọ ọrụ njikwa ha yanaN'ihi naIkike ikike o nwere; ma ebe ọ bụ naN'ihi naA ga-agbanwe ikike ikike njegharị site n'oge ruo n'oge, ọ nwere ike ọ gaghị aba nnukwu uru.09.03.2010
Kedu uru net Peter Sagan bara?
Peter Sagan net uru:Peter Saganbụ Slovak ọkachamara n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè onye nwerenet urunke $ 30.Peter SaganAmụrụ na Zilina, Slovakia na Jenụwarị 1990.
Ego ole ka ọ na-eri iji kwado ndị otu egwuregwu Tour de France?
Ndị otunwee ụdị sub-ndị nkwadomaka igwe kwụ otu ebe ha, akụrụngwa ha, na nri ha. Mana ~ 70% nke mmefu ego ha sitere na ahaonye nkwado, nke na-akwụ ụgwọ prootuebe na nso nke $ 5m ka $ 15m to name theotuma plasta akara ya na uwe niile.Sep 6 2020
Taa, ndị egwuregwu a ma ama ga-eme naanịkpochaa uwe ogologo ọkpa hagaa n'ihu. Buru n’uche ihe n’eme mgbendị na-agba ígwèamanye kakpochaa uwe ogologo ọkpa ha. Ndị ọkachamara na-asọ mpi ruo n'ókè na ahụ ha karịrị nrụgide - ọ na-adị ka ọ na-anwụ anwụ.Jul 21 2015 g.
Onwere onye meriri 4 jerseys niile gara France?
Eddy Merkx bụ onye mbụ BelgiummerieiheNjegharịsite naFrancekemgbe Sylvère Maes na 1939. Merckx ghọrọ dike mba. ỌmerieiheNjegharị anọoge ọzọ: na 1970, 1971, 1972 na 1974, na-atụkọ Jacques Anquetil. Merckx ka na-ejide ndekọ ndị ahụmakaogbommeri(34) na ọnụọgụ nke ụbọchị na Yellow Jersey (96).
Ego ole ka onye na-agba ịnyịnya ígwè na-enweta?
Ego ole ka ndị na-eme Cyclists na-eme? Pro Cyclists na-eme ihe ruru $ 100K - $ 200K ụgwọ ụgwọ ụgwọ kwa afọ Ọ nwere ike ikwu na ịrụ ụka adịghị ya na ịgba ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime ihe omume egwuregwu na-adịghị egbu egbu ma dị egwu, ebe ndị egwuregwu ga-arụ ọrụ siri ike ma sie ike.
Ego ole ka a na-akwụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè Tour de France?
Ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịme ego buru ibu site na nkwado nkwado, ịpụta anya, ụgwọ ọrụ na nkatọ. The Tour de France na-akwụ ego nrite nke £ 315,000 maka nke mbụ mana ọ bụ ọdịnala ka onye ndu otu ghara ịnara ego a kama nkewa ya n'etiti ndị otu na ndị ọrụ.
Kedụ ka ndụ dị maka onye egwuregwu ịgba ígwè?
Izu atọ n’ime sadulu maka 200km kwa ụbọchị na oké anwụrụ ọkụ na mmiri ozuzo; na-agbago ugwu di oke nkenke ma ogologo ka ewe kee gi; mkpọka, ịda na mmerụ ahụ - ọ bụ ndụ siri ike ịbụ ọkachamara ịgba ígwè.